Tamasgen Xurunaa!”Humni Addaa Oromiyaa garri caalu ‘Shiftaa Shanee’ loluu hin barbaadu” – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTamasgen Xurunaa!”Humni Addaa Oromiyaa garri caalu ‘Shiftaa Shanee’ loluu hin barbaadu”
Tamasgen Xurunaa!”Humni Addaa Oromiyaa garri caalu ‘Shiftaa Shanee’ loluu hin barbaadu”
“Humni Addaa Oromiyaa garri caalu ‘Shiftaa Shanee’ loluu hin barbaadu” TamasgenXurunaa!
Walgahii Waajjira Tikaa fi Gamaggama taasifame. Guyyaa sanbataa gara ganamaa walgahii ariifachiisaaatu waajjira tikaa Finfinnee, Ministeera Haajaa Alaatti aanee argamutti taasifame. Ajandaan walgahii haala sochii W-B-O kan ilaallatuudha. Walgahicharratti: Ajajoota waraanaa,- Poolisii Federaalaa fi Poolisonni Oromiyaas hirmaataniiru.
Sochii W-B-O’n gochaa jiru daran hammaateera. Gamaggama duraan taasifnee fi qajeelfama haaraa dabarsineen homtuu wanti sirraate hin jiru. Yeroo ammaa Wallagga arfan caasaan mootummaa walakkaa ol diigamee jira. -Shawaa Lixaa gammoojjiin aanota akka Meettaa Roobii, Walmaraa, Gindabarat, Cobii, Miidaa Qanyii, Daannoo, Jalduu fi karaa. Salaaleetin, gandoonni gammmojjii aanota akka ,Yaayyaa Guulallee, Dagam, Warra Jaarsoo, Hidhabuu Abootee fi Kuyyuun mootummaa harkaa ba’aa jiru kan jedhuu dha.
– Humni Addaa Oromiyaa garri caalu “Shiftaa Shanee” loluu hin barbaadu. Diina kana loluurra akka waan hin agarreetti waliin jiraachuu filatu. Inumayyuu meeshaa motummaan hidhachiise kilaashii hanga konkolaatti diinaaf laatanii deebi’aa jiru kan jedhanii dha.
-Humni waraanaa godinoota kanatti akka bobba’u. Raayyan ittisaa, Poolisiin Federaalaa fi Humni Addaa Oromiyaa wal wajjiin ta’ee kilaasteraan akka bobba’uu fi Hooggansa waloo tokkoon akka qajeelfamu jedhaniiru.
-Minishaan guutuu Oromiyaa keessatti leenjiii fudhatee jiru gara aanota kanatti ajeja waajjira paartii fi Bulchiinsaa fi Nageenyaa jalatti akka bobba’u. Humni qilleensas buufata isaa dirree xayyaaraa Asoosatti gargaarame haleellaa akka raawwatuuf karoorri kaa’ameera! Dhimma kanaan wal qabatee Hojiin propogaandas akka hojjetamu jedhameera .
Via: Boonsaa Ahmad
Humni Addaa Oromiyaa Tigraay deeme lolu didufi Ibsa Dhabbilee mirga namooma
Oduu Adoolessa 16,2021- Humni Addaa Oromiyaa Tigraay deeme lolu didufi Ibsa Dhabbilee mirga namooma
ODUU Addaa|Poolisoonni Oromiyaa Obboleeyyan Keenna WBO hin Lollu Jechuu fi Dhoohinsa Volkaanoo የደህንነቱ ደብዳቤ ስለልደቱ፣…
Humni Addaa Oromiyaa Lola N. Amaaraatti oofama jiraachuu fi Odeessa biroo
Oduu Adoolessa 11,2021 -Humni Addaa Oromiyaa Lola N. Amaaraatti oofama jiraachuu fi Odeessa biroo The…
Question of the people from Oromia, Sidama, Wolayta etc ! Where are the people that fought for change?